gimbal Archives - SmartMe
Archives tag: gimbal
Dom » Entries tagged with "gimbal"
DJI OM 4 - Video stabilizer / horonan-tsary Gimbal mankany amin'ny telefaona avy amin'ny DJI
đi, gimbal, oh 4, om3, Oslo finday, Osmo finday 3, Osmo Mobile 4, stabilizator
DJI dia naneho ny stabilizer farany ho an'ny telefaona - OM 4. Ahoana no tsy itovizany amin'ny kinova 3 ary mety ho an'ny laika koa izany? Izay rehetra amin'ny sarimihetsika farany!
Fimi PALM - webcam finday misy gimbal mifangaro
đi, FIMI, palmie fimi, gimbal, GoPro, kamera, xiaomi
"Fiainana eo an-tananao" miaraka amin'ireto teny ireto ny orinasa Fimi, izay mari-pamantarana Xiaomi dia manambara ny vokatra vaovao - Fimi PALM. Fakantsary mifangaro miaraka amin'ny gimbal telo-axes. Ny vokatra voalohany amin'ity karazana ity - DJI Osmo Pocket -...